HAGL RESIDENTIAL PROPERTIES IN YANGON | HAGL MYANMAR CENTRE
Our aim is to bring international experience, standards and regulation to the Myanmar real estate market. We guarantee our clients that we will act appropriately, professionally and ethically while achieving the best results across all of our different service lines.
About Hagl Myanmar Centre
တောက်ပသောအနာဂတ်အတွက် ရောက်ရှိလာမည့် ‘ဟိုင်ဂ်အန်းဂေလိုင် (HAGL) ၏ မြို့ပြစီမံကိန်း
ကမ္ဘာကျော်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအနက် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် ‘ဟိုင်ဂ်အန်းဂေလိုင်’ (Hoang Anh Gia Lai) စီးပွားရေးအုပ်စုကြီးမှ ဦးဆောင်ကာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံ၍ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်တွင် အိမ်ရာစီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ခေတ်မီအိမ်ရာဝယ်ယူလိုသူများ အနေဖြင့် ခန့်ညားထည်ဝါ၍ လက်ရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့် အဆင်ပြေကိုက်ညီသော သင်တို့၏ အိမ်မက်များအတွက် ‘SPS Myanmar’ ကုမ္ပဏီမှ လက်ကမ်းကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။
ယင်းစီမံကိန်းတွင် ကမ္ဘာအဆင့် ‘A’ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ရုံးခန်းနေရာများ၊ အကောင်း ဆုံး အမှတ်တံဆိပ် ပစ္စည်းများကို စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည့် ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိသောဟိုတယ်တို့နှင့်အတူ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုသူများအတွက် အသင့်နေ ထိုင်နိုင်သော အဌားတိုက်ခန်းများ၊ အင်းယားကန်ရေပြင်ကျယ်နှင့် အနီးရှိရှုခင်းအလှအပများကို ခံစားနိုင်သော တိုက်ခန်းများအား နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းသစ်များဖြင့် ဆောက်လုပ်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ‘HAGL’ မှ အဆိုပါ တိုက်ခန်းများအတွက် ‘Slade Property Services Myanmar (SPS)’ အား တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် (Lead Agent) အဖြစ် ခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
‘HAGL’ စီမံကိန်းတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေုဖြင့် ပါဝင်လာမည့် ‘SPS Myanmar’ ကုမ္ပဏီသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်းမှာ သာမက နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Centre isaspectacular new HAGL mixed-use development being developed by Hoang Anh Gia Lai. Consisting of Grade A office space,aretail mall, five star hotel and serviced apartments, Lake Suites will be the residential development of this unparalleled project.
Lake Suites is being presented to you by the HAGL appointed Lead Agent, Slade Property Services (Myanmar). SPS Myanmar has been chosen as Lead Agent for its vast local knowledge and experience as well as its extensive global reach and international expertise.
Lake Suites Residential Project in Yangon
အံ့သြဖွယ် လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ စုဝေးရာနေရာ ‘Lake Suites’ တိုက်ခန်းများ
အထပ်ပေါင်း (၃၂) ထပ်အထိ မြင့်မားသော ‘Tower’ (၃) လုံး၊ နောက်ဆုံးပေါ် ဒီဇိုင်းလက်ရာ များပါရှိသည့် အခန်းပေါင်း (၆၆၆) ခန်းနှင့်အတူ အဆောက်အအုံ၏ အပေါ်ဆုံးထပ် ခေါင်မိုးပေါ်တွင်
ပန့်သ်ဟောက်စ် ‘Penthouses’ (၁၂) လုံးဖြင့် ၀န်းရံတည်ဆောက်မည့် ‘HAGL Myanmar Center Development’ စီမံကိန်းသည် အနာဂတ်၏ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော နေချင်စဖွယ် ရိပ်မြုံသဖွယ် ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
Lakes Suites in Yangon is the residential project falling under Phase2of HAGL’s Myanmar Centre Development. A new concept of living comprising of 666 luxuriously designed apartments and 12 stunning penthouses.
Lake Suites is spread over3towers, reaching 32 stories above Yangon. Set in the heart of New Yangon, Lake Suites will provide an ideal investment or future home, withacompletion date set for the 1st quarter of 2017.
Residents will have the options of living in Shwedagon Pagoda’s opulent glow, or enjoying the urban cityscape withavariety of views to choose from.
Lake Suites Location
‘Lake Suites’ တိုက်ခန်း၏ တည်နေရာ
‘Lake Suites’ တိုက်ခန်းများသည် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိကာ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ မိနစ်(၂၀)သာ မောင်းနှင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အင်းယားကန်ဘောင်ရှုခင်း နှင့်တကွ ခန့်ညားထည်ဝါသော ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို ဖူးမျှော်နိုင်မည့်အပြင် ရန်ကုန်မြို့၏ ရှုမငြီး ဖွယ်သဘာဝအလှတရားများကို တွေ့မြင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Lake Suites is set in the heart of Yangon, with an uncompromised location, providing convenience for all lifestyles.
Located on Kabar Aye Pagoda Road on the shores of Inya Lake and in the shadow of the majestic Shwedagon Pagoda, residents will be in the heart of Nature, in the heart of New Yangon.
Lake Suite’s strategic location puts it at only 20 minutes away from the airport and an equally convenient distance to bustling Downtown Yangon.
ယင်းစီမံကိန်းမှ တိုက်ခန်းများကို တစ်ယောက်အိပ်အခန်းမှစတင်၍ မိတ်ဆွေတို့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ အခန်းများကိုလည်း သတ်မှတ်ထားသော တည်ဆောက်ရေး ကာလ (၂၀၁၇) နှစ်ကုန်ပိုင်းအတွင်း အပြီး လုပ်ဆောင်ကာ အခန်းအပ်နှံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
HAGL Lake Suites Residents can choose fromavariety of different unit types to best suite their lifestyle, from convenient 1bedroom apartments to sprawling penthouses, every need can be catered to.
Facilities of HAGL
ပီးပြည့်စုံသော ၀န်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး
အဆောက်အအုံအတွင်း ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဒီဇိုင်းဆန်းသော ရေကူးကန်များ၊ ကျယ်ဝန်းသော အဆင့်မြင့်အားကစားခန်းမ၊ တင်းနစ်စ်ကွင်း၊ ကလေးများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရသော ပျော်ရွှင် ဖွယ်ရာကစားကွင်း၊ အိမ်ရာနေပြည်သူများ အားလပ်ရက်တွင် အနားယူအပန်းဖြေနိုင်ရန် ‘Barbecue’ ပြုလုပ်စားသောက်ရန်နေရာ၊ စိမ်းလန်းသော မြက်ခင်းပြင်ပေါ် လမ်းလျှောက်ရင်း ရှုခင်းများကို ငေးမောခံစားရမည့် ရေပန်းနှင့်ပန်းဥယာဉ်၊ စတိုင်ကျလှပသော ‘club’ ခန်းမများ၊ လန်းဆန်းနုပျိုသွားစေမည့် ‘Spa’ အလှပြင်ခန်းမများနှင့်အတူ ၀ါရင့်စားဖိုမှူးများ၏ အရသာရှိသော ပာင်းလျာများရနိုင်သည့် စားသောက်ဆိုင်များပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အိမ်ရာနေသူများအတွက် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန် ကားအစီးရေ(၄,၀၀၀)၀င် ဆံ့သည့် ကျ
ယ်ဝန်းသော ကားပါကင်နေရာ၊ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သော အိမ်ရာစီမံ ခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ မီးဘေးလုံခြုံမှု အချက်ပြစနစ်ပါရှိခြင်း၊ (၂၄)နာရီ အချိန်ပြည့် လုံခြုံရေးစနစ်နှင့် ‘CCTV’ များပါရှိခြင်း၊ ရေကြီးမှုဒဏ်နှင့်အတူ (၇.၂)ရစ်ခ်ျတာစကေးပြင်းအားအထိ မြေငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်သည့် အဆောက်အအုံကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်ပါ အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ် သည်။
အရည်အသွေးပြည့်မှီပြီး၊ ခိုင်ခံ့လှပသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအဆောက်အဦးများ အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် ‘HAGL’ ကုမ္ပဏီမှ အိမ်ရာများ ကို ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် လက်ခံသွားမည့်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာများကို အီးမေးလ် ‘e-mail’ (သို့မပာုတ်) ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
HAGL Residential Residents will have access to the development’s exclusive lifestyle facilities. With amenities including world class swimming pools, tennis court, gymnasium andaplayground for the younger residents, every day will be filled with choice. Residents can also take some time out to relax with friends in the dedicated barbeque area, walk in the landscaped gardens or watch the clouds go by from the pavilion lawn.
The Myanmar Centre:
Living in the Lake Suites means you are never far away from all that Myanmar Centre has to offer. A sprawling retail mall offeringapremium supermarket, fashion houses, spas and international cuisine await your every whim.
Grade A offices are just minutes away, meaning that walking to work has never been this easy.
A five star hotel and serviced apartments mean you can host your guests in the upmost comfort and luxury.
Reaching your home will be as pleasurable as living in it; with 4,000 parking spaces, findingaplace for your car afterabusy day will be one less stress. Relaxation starts the moment you enter Myanmar Centre.
Life at home should not only be relaxing, it should also be safe and secure for you and your loved ones.
Lake Suites will benefit fromarange of security features, including 24hour security, extensive CCTV coverage and secure access for residents, meaning you can sleep soundly at home, and relax when you are away, knowing your home and your family are safe.
HAGL Lake Suites has been built to the highest of international safety standards, with state of the art fire safety, strategic flood protection systems and Singaporean standard earthquake resistance up to 7.2 on the Richter scale.
1- Serviced Apartment A1
2- Serviced Apartment A2
3- Residential Block B1
4- Residential Block B2
5- Residential Block B3
7- Children’s Playground
8- Tennis Court
9- Well Equipped Barbeque Area
10- Club House
11- Pavilion with Lawn
12- Landscaped Garden
13- Water Feature
14- Walking Path
For all enquiries please call us or email us below:
Mobile: +95 (0)9799 650 076
Office: +95 (0) 1 381 609
HAGL Hotline: +95 (0)9262 933 944
Email: info (at) sps-myanmar (dot) com